test otomatiki panguva yekumhanya
Kuru Kushandisa Michina Kwayedza Yekushandisa Panguva yeSprint
Kwayedza Yekushandisa Panguva yeSprint
Chikwata changu chinoshandisa Scrum kugadzira webhu kunyorera. SeA automation Tester muchikwata, ini ndinowanzo bvunzwa kuti ndigadzirise iyo nyaya mukati meiyo sprint, kunyangwe kana mushambadzi asina kana kupedza nyaya.
Kana kuri pakutanga kwekumhanya, ini ndine nguva yekugadzirisa iyo nyaya panguva yekumhanya, asi kunopera kumagumo, ini handiwane nguva yakakwana yekugadzirisa nyaya dzekupedzisira.
Chero mazano ekuti ndingaite sei kupedzisa otomatiki enhau mukati mezvino sprint?
Iwo otomatiki basa renhau dzese rinofanirwa kuve rondedzero yenyaya yekuitwa. Sezvineiwo iwe unofanirwa kuve nechinangwa chekugadzirisa nyaya mukati mechizvino sprint.
Nzira yekuita izvi ndeyekushandisa otomatiki sisitimu iyo inomhanyisa kunyora otomatiki zvinyorwa, kuitira kuti iwe ungotarisa pane zvinoitika pane kushandisa nguva kugadzira mabasa.
Mune yako test automation system, iwe unofanirwa kupatsanura iwo marara. Iyo yepasi dura inofanirwa kuve yako yekushandisa fomu kodhi iyo inotaura kune iyo otomatiki chishandiso, senge WebDriver.
Iyo inotevera dura kumusoro yako peji zvinhu zvinoteedzera zvaunoshandisa. Mumakirasi aya kana peji zvinhu iwe unofanirwa kunyora akawanda mabasa kudzora zvizere pamusoro pekunyora zviitiko zvevashandisi. Apa ndipo panoitika mashiripiti uye maitirwo ezvinhu.
Iyo yekupedzisira dura ndiyo yako mamiriro. Izvi zvinofanirwa kungodaidza mabasa ari mune rako peji zvinhu. Iwe unongoda kutsanangura izvo zvinoda kuitwa uye izvo peji zvinhu zvinofanirwa kuzvitarisira.
Nenzira iyi kunyangwe iwe uine pfupi nguva kumagumo eiyo sprint, unogona kukurumidza kugadzira zvoga zviitiko kana uine hwaro hwakasimba.
Kugadziridza bvunzo dzekudzokorodza panguva yekumhanya kunoda kurangwa.
Iyo chiyero cheiyo regression bvunzo inowedzera uye nekudaro iyo yekuchengetedza inowedzerawo. Unofanira kuziva izvozvo kwete ese miedzo inoda kuve otomatiki .
Iwe unofanirwa kungo gadzirisa bvunzo dzinopa kukosha kune bhizinesi.
yakanakisa ipad pro skrini inodzivirira
yakanakisa chinyorwa 20 Ultra screen chengetedzo
Ungachinjanisa sei Samsung & apos; s default text-to-speech engine neGoogle & apos; s TTS manzwi
Samsung Galaxy S7 uye S7 Edge runyerekupe kuongorora: tsananguro, maficha, mutengo uye zuva rekuburitsa
Akanakisa iPhone 11 makesi (2020)
Tsigiro inokura yezita reGlass Note 7; Samsung ichanyatsosvetuka Chinyorwa 6?
T-Mobile yakagadzirira kukanda yemahara mitsara ku (ndoda) munhu wese kekutanga mu2021
King anotangisa Bubble Witch 3 Saga yeApple uye iOS
Apple iPhone SE (2020) Ongororo
Amazon inovhura yakagadziriswazve Echo, Echo Dot, uye Echo Ratidza gumi nemitengo mikuru